Ku maalgeli iibsiyadaada dukaanka rasmiga ah ee Apple adiga oo aan dulsaar lahayn | Wararka IPhone
Ku maalgeli iibsiyadaada dukaanka rasmiga ah ee Apple adiga oo aan dulsaar lahayn
Mar labaad iibsiga ayaa lagu maalgeliyaa wax soo saar kasta oo Apple ah oo ka badan 150 euro ayaa leh 0% dulsaar. Waa dalacsiin inta badan lagu sameeyo Apple waqti ka waqti iyo taariikho cayiman sida kuwa aan hadda ku jirno. Tani waxay ka dhigan tahay inaanan waxba ka bixinaynin wax soo saarka sidaas darteed waa dhiirrigelin aad u xiiso badan.
Xaaladdan oo kale, waa wax iska caadi ah in Cetelem ay naga qaadato lacag dulsaar ah iibsashada laga sameeyay dukaamada rasmiga ah ee Apple markaan maalgelinayno, laakiin hadda iyo ilaa bisha soo socota ee Janaayo 17, 2019 waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku raaxeysano iibsashada la maalgeliyo iyada oo aan la daneyneyn.
Inta udhaxeysa 3 ilaa 12 bilood dulsaar la'aan
Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan waa inaan maalgelin karno shey kasta oo ka badan qadarka 150 euro iyo waqtiga ugu badan waa 12 bilood in la xaliyo, maxaa ka dhaca 12kan bilood durba xiisaha ayey sii kordhinayaan. Dhiirrigelintu aad ayey u wanaagsan tahay maadaama aan sidoo kale weydiisan karno qadarka aan dooneyno inaan ku bixino badeecada, muhiim maahan inaad weydiisato lacagta oo dhan dabacsanaantani waxay u fiican tahay kuwa haysta keyd yar si ay u iibsadaan alaabada Apple tan iyo markii ay wuxuu u oggolaanayaa iyaga inay gaaraan iibsashada kahor iyo iyadoon wax badan laga bixin.
Dhiirrigelinta waxaa laga heli karaa dukaamada Apple iska leedahay iyo shabakadda internetka ee shirkadda halkaas oo aan xitaa ku sameyn karno xisaabinta khidmadaha aan bixin doonno bil kasta iyo wax walba oo aad u fudud. Xaaladda markii hore aad ku maalgashatay wax soo saar shirkadda Apple, wax kastaaba waxay noqonayaan kuwo aad u dhaqso badan oo fudud, haddii aynaan waligeen maalgelin wax soo saar ah waa inaan qaabeynaa amaahda Cetelem horey, laakiin waxaan horey u shaacinay inaysan haba yaraatee wax dhib ah lahayn. Waxaan cadeyneynaa in wiilasha Cupertino ay doorteen a Waqti fiican ololahan maalgelinta ee ku kacaya 0.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Ku maalgeli iibsiyadaada dukaanka rasmiga ah ee Apple adiga oo aan dulsaar lahayn
Ma awoodi doonaan inay furaan iPhone X ama ka sareeya madaxa daabacan ee 3D?
Sida loo qoro qoraal ka soo baxa shaashadda qufulka ee iPhone ama iPad-kayga